लगातार घटिरहेको बजारमा सामान्य सुधार
नेपाल लाइभ सोमबार, चैत ३, २०७६, १६:१५
काठमाडौं- विगतका दिनमा लगातार घटिरहेको बजारमा सोमबार सामान्य सुधार देखिएको छ। सोमबार ३.३४ अंकले सुधार भएर १३१६.३९ अंकमा रोकिएको छ। बजारमा समान्य सुधार देखिए पनि कारोबार रकम भने घटेको छ। सोमबार १८० वटा कम्पनीको एक अर्ब ६१ करोड रुपैयाँको कारोबार भएको छ।
दोस्रो बजारमा तीव्र उचारचढाव देखिएको छ। होटल, उत्पादन र म्युचुअल फण्डको सूचकमा सामान्य गिरावट देखिए पनि बाँकी सूचक सुधार भएका छन्।
सबैभन्दा धेरै नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १५ करोड ४० लाख रुपैयाँको खरिद बिक्री भएको छ। त्यस्तै एनआइसी एसियाको १२ करोड ८१ लाख रुपैयाँको कारोबार भएको हो।
सबैभन्दा धेरै सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ९.८८ प्रतिशतले सुधार भएको छ। सबैभन्दा महंगो युनिलिभरको शेयर मूल्य १२६७ रुपैयाँले घटेको छ।
कम्पनीको शेयर मूल्य २० हजार २८९ रुपैयाँमा झरेको हो। कोरोनाको विश्वव्यापी प्रभावले अन्तर्राष्ट्रिय स्टक मार्केटमा पनि भारी गिरावट देखिदै आएको छ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि कोरोनाले प्रभाव पार्ने आँकलनसँगै नेपाल शेयर बजार तल झरिरहेको छ। नेप्सेले आइतबारदेखि कारोबार समय थप एक घण्टा थपेर ५ घण्टा पुर्‍याएको हो।
४ अर्बको ५ वर्षे 'नागरिक बचतपत्र' जारी, कति पाइन्छ ब्याज? नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारको तर्फबाट राष्ट्र ऋण व्यवस्थापन विभाग मार्फत जेठ एक गतेदेखि जेठ २१ गतेसम्म बिक्री खुला गरेको छ। यो... आइतबार, जेठ ११, २०७७
पूर्वराजाको तस्बिर भएका नोट चलनचल्तीमा नपठाउन राष्ट्र बैंकको निर्देशन राष्ट्र बैंकको निर्दशनअनुसार नोटमा स्टिचको प्रयोग गर्न पाइने छैन। यसमा आवश्यकतानुसार रबर/प्लास्टिक/पपर ब्यान्ड प्रयोग गर्न सकिने राष... आइतबार, जेठ ११, २०७७
नयाँ बजेटमा सेयर बजार : अल्पकालीन र दीर्घकालीन लगानीकर्ताका लागि छुट्टाछुट्टै लाभकर आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा दोस्रो बजारको पुँजीगत लाभकरको गणना विधिलाई परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गएको छ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड... आइतबार, जेठ ११, २०७७
कोरोनापछिको अटोमोबाइल व्यवसाय : मल्टिब्राण्ड शोरुमको सुरुवात गरौं, अनावश्यक खर्च घटाऔं कपिल शिवाकोटी
कोभिड १९ को जोखिम न्यूनीकरणका आधार स्तम्भ र आगामी बजेट महेश्वर घिमिरे
श्रमिक कोरोना संक्रमित भए उद्योगीलाई दण्ड हुँदैन, सरकारले व्यवस्थापन गर्छ विनोद केसी
अर्थतन्त्र केन्द्रित विशेष समितिको निष्कर्ष : लकडाउन लम्बिए आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत नेपाल लाइभ
अपेक्षा स्टिमुलस प्याकेजसहितको बजेट, स्रोत सम्भव छ? सविन मिश्र
प्रदेश-५ नीति तथा कार्यक्रम : जिल्ला अस्पताल ५० शय्याको बनाइने, प्राथमिकतामा पूर्वाधार विकास सविन मिश्र
'जनतासँग प्रदेश सरकार' कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै प्रदेश ५ नेपाल लाइभ